Filimka James Bond Hadda Kor U Qaadaya Dalxiiska Jamaica ee UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Filimka James Bond Hadda Kor U Qaadaya Dalxiiska Jamaica ee UK
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Entertainment • Films • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White (2nd l) waxay la wadaagtaa daqiiqad la socota maamulayaasha caalamiga ah ee Amadeus, Madaxweyne kuxigeenka, Tom Starr (l) iyo Agaasimaha, Alex Rayner (c); Agaasimaha Gobolka JTB ee UK iyo Waqooyiga Yurub, Elizabeth Fox (2aad r) iyo Delano Seiveright, La-taliyaha Sare & Istaraatiijiyadda Wasaaradda Dalxiiska, ee Suuqa Socdaalka Adduunka ee London, England, Arbacada, Noofambar 3.
Madaxda sare ee Amadeus, oo ah shirkad tignoolajiyada socdaalka caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Yurub, ayaa maanta ku wargelisay saraakiisha sare ee dalxiiska Jamaica in siideynta Sebtember 30-keedii filimkii ugu dambeeyay ee James Bond, No Time to Die, kaas oo muuqaalo badan ku leh Jamaica, uu gacan ka geysanayo wadista xiisaha u socda Jamaica, gaar ahaan Boqortooyada Ingiriiska.
Maamulayaasha Amadeus waxay xuseen inay arkayaan raadinta aad u saraysa iyo qabashada xiisaha iyo baahida loo qabo Jamaica.
Wasaaradaha Dalxiiska iyo Dhaqanka iyo JAMPRO ayaa door hogaamineed ka qaatay bixinta saadka, xiriirka dadweynaha iyo suuqgeyntii filimkii Bond ee ugu dambeeyay.
Jamaica waa hoyga ruuxiga ah ee Bond, iyadoo Ian Fleming uu ku qorayo buugaagta Bond ee gurigiisa, "Goldeye."
No Time to Die wuxuu u muuqdaa mid diyaar u ah inuu dhaafo Avengers: Dhamaadka ciyaarta UK, isagoo kaalinta shanaad ka galay liiska lacagaha lacagaha ugu badan soo xareeyo ee abid soo baxay Marvel's superhero blockbuster.
Xog-warrankan waxa bixiyay Tom Starr iyo Alex Rayner, Madaxweyne-ku-xigeenka iyo Agaasimaha Amadeus siday u kala horreeyaan, iyagoo jooga Suuqa Socdaalka Adduunka ee London, England. Farsamada iyo xalalka Amadeus waxay u adeegaan sidii laf dhabarta iyo awooda warshadaha safarka ee caalamiga ah, oo ay ku jiraan diyaaradaha, garoomada diyaaradaha, huteelada iyo tareenada, makiinadaha raadinta, wakaaladaha safarka iyo hawlaha dalxiiska. Maamulayaasha Amadeus waxay xuseen inay arkayaan raadinta aad u saraysa iyo kaydinta xiisaha iyo baahida halka loo socdo Jamaica ee Boqortooyada Midowday (United Kingdom) waxayna u nisbeeyeen shaqada Wasaaradda Dalxiiska iyo wakaaladeeda Jamaica Tourist Board (JTB) oo la-hawlgalayaasha muhiimka ah ee suuqa iyo sidoo kale filimka cusub ee James Bond.
Jamaica waa hoyga ruuxiga ah ee Bond, iyadoo Ian Fleming uu ku qorayo buugaagta Bond ee gurigiisa, "Goldeye." Filimada Bond Dr. No iyo Live iyo Let Die ayaa sidoo kale lagu duubay halkan. Ma jiro wakhti la dhimanayo, filim sameeyayaashu waxay dhiseen guriga Bond ee hawlgabka xeebta ee San San Beach ee Port Antonio. Muuqaallada kale ee laga duubay Jamaica waxaa ka mid ah la kulanka saaxiibkiis Felix iyo la kulanka cusub 007, Nomi. Jamaica sidoo kale waxay labanlaabtaa muuqaallada Cuba ee dibadda ah.
Jamaica bishaan waxay bilaabi doontaa inay hesho ugu yaraan 16 duulimaad todobaadkiiba Boqortooyada Midowday, taasoo ku soo celinaysa jasiiradda ku dhawaad ​​100 boqolkiiba awoodda kursiga diyaaradda iyadoo tirooyinka dalxiisku ay dib u soo laabanayaan. TUI, British Airways iyo Virgin Atlantic waxay bixinayaan joogsi la'aan Duulimaadyada u dhexeeya UK magaalooyinka London, Manchester, Birmingham iyo Jamaica.
Wasiirka Dalxiiska Edmund Bartlett ayaa hogaaminaya koox heer sare ah oo ka socota Wasaaradda Dalxiiska iyo JTB ee Suuqa Socdaalka Adduunka, oo ah mid ka mid ah bandhigyada ugu waaweyn ee ganacsiga dalxiiska caalamiga ah ee adduunka. Bartlett waxaa ku biiray Guddoomiyaha JTB, John Lynch; Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White; La-taliyaha Sare & Istaraatiijiyadda, Wasaaradda Dalxiiska, Delano Seiveright; iyo Agaasimaha Gobolka JTB ee UK iyo Waqooyiga Yurub, Elizabeth Fox.